NOSY VARIKA : Manana tombony amin’ny fahavitan’ny lakandranon’i Pangalana
Telo volana izay no nanomboka nandray ny toerana maha solombavambahoaka azy ireo Depiote eo anivon’ny Antenimierampirenena, etsy Tsimbazaza. 25 octobre 2019
Ho an’ny Depioten’i Nosy Varika, Baofeno Micheline. nambarany fa efa misy ny dingana vita nandritra izay telo volana niasany izay ary misy koa ny mbola an-dalam-panatanterahana. “Isaorana ny fitondram-panjakana fa efa azo lazaina ho misokatra ny anjara masoandro ho an’i Distrikan’i Nosy Varika noho ireo tetikasa napetrany”, hoy ny nambarany. Raha tsiahivina dia manana tombony amin’ny fanamboarana ny lakan-dranon’i Pangalana ny ao amin’ny Distrikan’i Nosy Varika. Tena ilaina ny fanamboarana indray ity lakandranon’i Pangalana ity, raha ny nambaran’ny Depiote satria efa afaka mampiasa izany an-kalalahana ny mponina any an-toerana amin’izao fotoana izao.
Mizotra araka ny tokony ho izy ny tetikasa fanadiovana ity lakan-drano ity raha ny tatitra nataony hatrany ary efa tonga eo amin’ny 30 km tsy hahatongavana ao Nosy Varika izy amin’ izao fotoana izao.
Fantatra koa amin’izao fotoana izao fa hamboarina ny lalam-pirenena faha-11 mampitohy an’i Mananjary sy Nosy Varika ary Nosy Varika sy Mahanoro. Anisany zava-baovao napetraky ny Minisiteran’ny Serasera any amin’ity Distrika ity ihany koa ny famerenana indray ny haino aman-jerim-panjakana, TVM sy RNM. Notsindriany manokana fa tsy nisy nijery nandritra ny taona maro izy io. Efa an-dalam-panamboarana koa amin’izao ny mahakasika ny jiro any amin’iny Faritra iny. Noho ny tsy fahampian’ny angovo manodina ny milina tany an-toerana moa teo aloha dia tsy afaka nisitraka io jiro io nandritra ny tontolo andro ny mponina fa ora 8 na 10 ihany no nandehanan’izany raha be indrindra.
Nitondrana fanatsarana ny mahakasika izany raha ny tatitra nataon’ny Depiote hatrany ary efa nisy ny fihaonana mivantana tamin’ny Minisitra tompon’andraikitra mba hahafahana mampandeha ny jiro 24 amin’ny 24 ora. Anisany hisitraka ny angovo azo havaozina tamin’ny alalan’ny tetikasa Johary koa moa ity Distrika ity, raha ny fanazavana hatrany.